Ngomhla we-Meyi 2021-kwiNombolo ye-1 yeWebhusayithi yaseYurophu
Archives Monthly: Ngamana 2021
31 UCanzibe 2021
UShabakhobidin Zoirov Uyoyikisa u-Amit Panghal waseIndiya kuRhwebo oluBalaseleyo
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi ongahlawulwayo	I-AIBA, I-ASBC, Iimbaleki zamanqindi zamadoda aseAsia kunye nabasetyhini	0
Amanqaku alishumi aphezulu kumdlalo wamanqam wabanjwa kumhla wokugqibela wokhuphiswano e I-ASBC Amadoda aseAsia amaNtshatsheli eBhola eKhatywayo e-Dubai, e-United Arab Emirates. U-Shakhobidin Zoirov wase-Uzbek wayenomlo omnandi ngokuchasene ne-Amit Panghal yase-India kumdlalo ophindayo wokugqibela we-2019 AIBA World Boxing Championship. I-Uzbekistan iphumelele ezintandathu, iMongolia zantathu ngelixa i-India yafumana indondo enye yegolide kumdlalo wamadoda wokugqibela.
Zizonke iimbethi manqindi ezili-150 eziquka amanenekazi angama-47 akhuphisene ngeembasa kunye namabhaso emali kwi-ASBC Asian Men's & Women Elite Boxing Championship. Amabhaso emali okhuphiswano lweembasa zegolide, zesilivere nezebronze zathiwa thaca nguNobhala Jikelele we-AIBA uMnu Istvan Kovacs waseHungary eDubai.
La mazwe alandelayo ali-17 aye kwi-ASBC yase-Asia yamadoda kunye ne-Women's Elite Boxing Championship e-Dubai: Afghanistan, Bahrain, Indonesia, India, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kuwait, Laos, Mongolia, Philippines, Qatar, Sri Lanka, Tajikistan, United Arab. I-Emirates, kunye ne-Uzbekistan.
UMirzakhmedov ukhusele itrone yakhe kwilightweightweight (49kg)
UNodirjon Mirzakhmedov wase-Uzbekistan ufike kwindawo ye-ASBC yase-Asia Elite Boxing Championship njengesihloko se-lightweight (49kg). U-Uzbek oneminyaka engama-27 ubudala waphumelela iwonga leNdebe yeRhuluneli eSt. Petersburg, eRashiya kwinyanga ephelileyo, apho woyisa abachasi abaphezulu ngumahluko omkhulu. I-Uzbek ilawula umjikelo wokuqala kumdlalo wokugqibela ngokuchasene noDaniyal Sabit oneminyaka eli-18 ubudala waseKazakhstan, onguMphathiswa weSizwe omtsha kwinqanaba elincinci lobunzima. UMirzakhmedov wamisa u-Kazakh oselula nge-jabs kwaye wamhlasela ngamagwegwe abalulekileyo kumjikelo wesibini. U-Uzbek oneminyaka esithoba ubudala wayongamele ukhuphiswano ngezakhono zobugcisa ezinqabileyo kwaye wakhusela itrone yakhe e-Asiya.
“Yimbasa yesibini yegolide kum kwi-Asia Boxing Championship kodwa imvakalelo iyamangalisa kwakhona. Ndonwabe kakhulu njengoko umchasi wam omncinci waseKazakh wayelunge kakhulu. Ulithemba elikhulu ngekamva kodwa bendifanele le mbasa yegolide. Enkosi kubalandeli bam kunye nenkxaso yeqela lam, ” Uvakalise impumelelo yakhe kuma-Uzbek anamava.
UZoirov woyisa u-Amit kwakhona
Umdlali ophumelele iMidlalo yeOlimpiki eUzbekistan uShoakhobidin Zoirov woyise u-Amit Panghal wase-India kumdlalo wokugqibela we-Yekaterinburg 2019 AIBA World Boxing Championship. Iinkwenkwezi ezimbini zaphinda zadibana kwakhona kwenye yokugqibela kwi-ASBC yaseAsia Elite Boxing Championships eDubai. UPanghal ebenamagwegwe amnandi kumjikelo wokuqala ngelixa uZoirov ebambe indibaniselwano enzima kwimizuzu yokuqala ye-flyweight (52kg) yabo yokugqibela. Zombini ezi mbethi manqindi zazabalazela ukufumana imbasa yegolide kwaye benza idabi elibalaseleyo kwitumente. UZoirov wagcina umgama ngcono kumjikelo wesithathu owawusisigqibo, kwaye iUzbek yakwazi ukubetha imbangi yayo yaseIndiya kwakhona.
“Kube lukhuphiswano oluhle kakhulu namhlanje, ndilonwabele kakhulu. I-Amit yayingcono kakhulu kunangexesha lokugqibela, ke kuye kwafuneka ndigcine uxinzelelo lwam olupheleleyo kude kube ngumzuzwana wokugqibela. Ndiyazi ukuba ibingeyiyo indibano yethu yokugqibela no-Amit kwaye ndiyathemba ukuba uya kuba namandla ngakumbi kwixesha elizayo. Ndiyenzile, kwaye ibe yimpumelelo ebalulekileyo kum, ” utshilo u-Uzbek odiniweyo emva komdlalo wokugqibela omnandi.
IMongolia yamangaliswa ngeembasa zegolide ezilandelelanayo ezintathu
U-Enkh-Amar Kharkhuu waseMongolia waphumelela i-Universiade yasehlotyeni ka-2013 kwaye walungela iMidlalo yeOlimpiki yaseRio 2016, kodwa wayengengoyena mntu wayethandwa ngokuchasene ne-AIBA World Champion kunye neQela le-ASBC laseAsia uMirazizbek Mirzakhalilov. I-Uzbek enzima iqale ukhuphiswano ngcono kwaye yafumana inani eliphezulu leepunch kodwa u-Kharkhuu ukwazile ukubuyisa umncintiswano wabo obalaseleyo we-bantamweight (56kg) eDubai.
Iqela lakhe, i-ASBC Asia Champion kunye ne-Asia Games eyaphumelela u-Erdenebat Tsendbaatar waphumelela umjikelo wokuqala ngokuchasene no-Daniyal Shakhbakhsh oneminyaka engama-21. Umbethi manqindi ongasindiyo waseMongolia (60kg) wayomelele kakhulu kulutsha lwaseIran kwimizuzu yokuqala yomdlalo wabo wokugqibela. I-Shakhbakhsh ibonakalise ukusebenza okungcono kweyesibini kodwa iTsendbaatar yayizithembile kwaye yabanga imbasa yesibini yegolide yaseMongolia eDubai.
Umqukumbeli wesithathu waseMongolia yayinguChinzorig Baatarsukh owaphumelela iimbasa zesilivere kukhuphiswano oluphambili lwaseAsia kwaye wayejolise kwimedali yakhe yokuqala yegolide eDubai. Umbethi manqindi waseMongolian welterweight (64kg) woyisa owayesakuba yintshatsheli ye-ASBC yaseAsia uShiva Thapa kuhlaselo kwaye wakhokela emva kwemizuzu emithathu yomlo. I-Chinzorig yayijolise nzima kuma-Indiya ayonyusa ithempo yakhe kodwa iMongolia iyenzile imanqindi ekrelekrele kumdlalo wabo wokugqibela.
“Le ibiyintshatsheli yam yesithathu eAsia kwaye emva kweembasa zesilivere ndaziphumelela eDubai. Le yimvakalelo emnandi, ekugqibeleni ndiyintshatsheli, iyintoni impumelelo yabaqeqeshi bam, ” wabanga impumelelo yakhe eMongolia uChinzorig Baatarsukh.
Amaxesha e-Uzbek egolide kwi-welterweight, middleweight kunye nobunzima obunzima
U-Uzbekistan u-Bobo-Usmon Baturov wayeyintshatsheli ekhuselayo kwi-welterweight (69kg) kwaye wayelindele ukhuphiswano olunzima ngokuchasene nembasa yobhedu ye-AIBA ye-AIBA ye-AIBA yeBhola ekhatywayo kumdlalo wokugqibela. Umchasi wakhe kumdlalo owandulela owokugqibela, igqala lase-India uVikas Krishan Yadav wenzakala kumjikelo wokuqala kwaye kwenzeka into efanayo nembethi manqindi yaseKazakh kumdlalo wokugqibela.
I-Hamburg yase-Kazakhstan ye-Hamburg 2017 ye-AIBA yoKhuphiswano lomdlalo wamanqindi kwi-Abilkhan Amankul kunye ne-Uzbekistan ethembisayo ye-middleweight (75kg) yomlo wamanqindi, u-Saidjamshid Jafarov uhambise umlo olandelayo obalaseleyo eDubai. U-Uzbek omncinci longezo elitsha kwiqela labo lesizwe eliphambili kodwa izakhono zakhe zembaleki ziyamangalisa kwaye wayisebenzisa kakuhle kumjikelo wokuqala. I-Kazakh eneminyaka engama-24 ubudala yonyusa isantya sayo kumjikelo wesibini kwaye emva kwenye yejabs zakhe ezigqwesileyo usompempe wabala uJafarov. I-Uzbek yayisentle ngokwaneleyo kumjikelo wesithathu ukuphumelela umdlalo wokugqibela onomdla kwaye waba yinkosi entsha ye-middleweight (75kg).
Imbasa yabo yesithathu ngokulandelelana yafunyanwa nge-AIBA World Boxing Championship kwimbasa yesilivere uDilshodbek Ruzmetov kwi-heavyweight (81kg) kulandela impumelelo yakhe kumfo omtsha wase-Iran uMysam Gheslaghi. Imbethi manqindi yaseIran ibinamandla kwaye ikhaliphile kumdlalo wamagqibela kankqoyi kodwa ifumene amanqindi amaninzi kuluhlu olude.
I-Sanjeet kunye neJalolov ngabaphumeleleyo kumanqanaba obunzima kakhulu
USanjeet oneminyaka engama-24 ubudala wase-India wayephume kumjikelo wokugqibela kwi-Yekaterinburg 2019 AIBA World Boxing Championship kwaye ulithemba elinamandla kwi-heavyweight (91kg) kodwa wayengengoyena mntu othandwayo ngokuchasene noVasiliy Levit waseKazakhstan. Iimbaleki ezintathu ze-ASBC yaseAsia Kazakh ayinakunciphisa umgama wokulwa ngokuchasene ne-Indiya ende kodwa yabuyela kukhuphiswano ikwimo entle kowesibini.
U-Uzbekistan olawula i-AIBA yeQela leHlabathi kwi-heavyweight (+ 91kg), u-Bakhodir Jalolov uphumelele isihloko se-ASBC Asia Elite Boxing Championship ngo-2017 nango-2019. UJalolov usebenzise ukufikelela kwakhe ngokukuko kumjikelo wokuqala kwaye usompempe wabala uKazakh ekupheleni komjikelo wokuqala. Inkwenkwezi yase-Uzbek ibambe ngaphezulu kunamaKunkabayev kwaye yoyisa imbangi yayo ephambili kwakhona.
Uluhlu lwabaphumelele kumjikelo wamadoda eDubai
49kg: UNodirjon Mirzakhmedov, Uzbekistan
52kg: I-Shakhobidin Zoirov, Uzbekistan
I-56kg: I-Enkh-Amar Kharkhuu, iMongolia
I-60kg: Erdenebat Tsendbaatar, Mongolia
I-64kg: IChinzorig Baatarsukh, iMongolia
I-69kg: Bobo-Usmon Baturov, Uzbekistan
75kg: USayjamshid Jafarov, Uzbekistan
81kg: IDilshodbek Ruzmetov, Uzbekistan
91kg: ISanjeet, eIndiya
+ 91kg: Bakhodir Jalolov, Uzbekistan
Ukuba uyayithanda into esiyenzayo kwaye unqwenela ukusixhasa, unokwenza ngokuchofoza iqhosha elithi 'PayPal' okanye ngokuchofoza ifom ekhuselekileyo phantsi. Nokuba yi- $ 1 nje, uncedo lwakho lungasigcina sikuphathela iindaba zamanqindi zeelwimi ezahlukeneyo kunye neziphumo ezivela kwihlabathi liphela kwaye ziya kusinceda sandise ukuze sikwazi ukukuzisela umxholo ongaphezulu kwixesha elizayo!
Uncedo lwakho luza kwenza umahluko kuthi - qhubeka uxhasa amanqindi 🙂
[nika_ifom id = "13966 ″]
U-Estrella Millan vs La Ley Guzman kwi-WBA Flyweight Isihloko ngoJuni 5
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi owasetyhini	U-Eva Guzman, UIsabel Millan, UMillan vs. Guzman	0
Isabel Millan vs. Eva Guzman
I-Televisora ​​del Pacífico eMillán 3/6/21
I-Culiacan, Sinaloa, Mexico-wazalwa UIsabel "Estrella" Millan (I-29-6-1, i-9 KOs) iya kuba nethuba elitsha lobuntshatsheli ngokuchasene nomlo onzima waseVenezuela UEva "La Ley" Guzman (Ii-17-1-1,10 zeeKO).
I-World Boxing Association Flyweight Championship iza kuba semngciphekweni, kwaye omabini amajoni ayinxalenye yenqanaba lombutho. Le iya kuba yenye yeemilo eziphambili zekhadi elizakubanjwa nge-4 kaJuni kwizakhiwo zeTelevisora ​​del Pacífico kwidolophu yakuloMillán.
Umlo walapha unamava kwaye enye yezona milo zibalaseleyo wayenazo yayikukuchasana nembasa le-Olimpiki izihlandlo ezibini uNicola Adams wase-Great Britain ngo-2018. Kunyaka olandelayo walwa ne-IBF eyi-112 yeepawundi enguLeonela Yudica eArgentina, apho I-hardbutt enzima ishiye ukungqubana ngaphandle kwesigqibo kumjikelo wesine. Uye walwa noNaoko Fujioka obalaseleyo kwi2017, xa wawa kumakhadi eejaji, ngesihloko esinye awayejonge ukusoyisa ngokuchasene neGuzman esemngciphekweni. Okwangoku ubekwe kwinqanaba # 1 kwinqanaba le-WBA Flyweight ngelixa umchasi wakhe ebekwa kwinqanaba # 4.
Kwelinye icala, inzalelwane yaseMaracay, eVenezuela, inerekhodi ehloniphekileyo nee-KOs ezilishumi ngaphezulu kwe-17 iphumelele kunye nelahleko enye ngokuchasene noDebora Rengifo, ekwabelana naye naye ngokuzoba. Ngamava amancinci kodwa isitayile esinomtsalane kwindandatho, "La Ley" Guzman wenze umsebenzi wakhe kwiLight Flyweight kunye neMinimumweight ukuza kuthi ga ngoku, sele efikile kwibhande le-WBA International kudidi lokugqibela emva kokoyisa iPanamani Yaditza Perez ngo-2018.
NgoLwesihlanu, nge-4 kaJuni, eCuliacan, eMexico, omnye wala magorha mabini uya kuphumelela ibhanti emnyama negolide kwiipawundi ezili-112.
UFranchon Crews-Dezurn Ubuso buka-Elin Cederroos eMiami nge-19 kaJuni
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi owasetyhini	Crews-Dezurn vs Cederroos, UElin Cederroos, IFranchón Crews-iDezurn	0
Ipaki yeLoanDepot eMiami, eFlorida 19/6/21
Nge-19 kaJuni eLoanDepot Park eMiami, eFlorida, intshatsheli ye-middleweightweight ye-World Boxing Council, UFranchon Crews-Dezurn, Babuyele eringini ukuze bajongane nenye intshatsheli, iSweden UElin Cederroos.
Yimbalasane ebalulekileyo yekhadi elikhokelwa nguLópez vs Kambosos.
UCrews-Dezurn waphinda wafumana izihloko zehlabathi emva kokuphulukana nazo no-Alejandra Jiménez waseMexico ngoJanuwari 2020. Inkwenkwezi yaseNorfolk, eVirginia yabona ukulahleka kwakhe kwesigqibo kubuyiselwa kumncintiswano emva kokuba kutyhilwe ukuba uJiménez akaphumelelanga kuvavanyo lokuchasana nokusetyenziswa kweziyobisi.
UCederroos uphumelele isihloko se-IBF se-168-pound kumlo wakhe wesithandathu nje. Kutshanje wongeze isihloko se-WBA kwingqokelela yakhe emva kokufumana isigqibo esiphumelele ngokuchasene no-Alicia Napoleón Espinosa.
U-Ernesto Salcedo & Luis Rosales Baphumelele ngoMgqibelo
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	UAlberto Ruiz, Eduardo Martinez, U-Ernesto Salcedo, UJose Rojas Alba, ULuis Rosales, Rosales vs. Alba, USalcedo vs Martínez	0
U-Ernesto Salcedo vs. UManuel Martinez
ULuis Rosales vs. UJosé Rojas Alba
U-Ernesto Salcedo kwaye ULuis "Chapulín" Rosales baziqinisekisile njengamathemba amahle, bephumelela uloyiso olubalulekileyo ngoMgqibelo ebusuku.
Eyokuqala enkqonkqozo oluvakalayo kwimijikelo emibini nje kuphela, kwikhadi “leZithembiso zikaZwelonke” elinikezelwe ngobusuku bangoMgqibelo nguChiquita González Boxing noPHILLIPS - ASSA ABLOY, olona phawu lubalaseleyo lweponti.
Umnyhadala emva kweengcango ezivaliweyo, uhambelana nazo zonke iinkqubo zempilo, ububandakanya imilo emi-6 kwaye usasazwa yi-TVC Deportes, ukongeza kusasazo lwephepha likaFacebook likaChiquita González.
U-Ernesto Salcedo akazange aphoxeke kwisiganeko esiphambili sasebusuku kwaye wazidibanisa njengethemba elomeleleyo lesizwe, emva kokukhupha UManuel Martinez kwimizuzu emi-2: 26 yomjikelo wesibini, kumlo omkhulu weSuper Bantamweight.
Nangona bekukho amaxesha ambalwa okufunda ngobulumko, uSalcedo emva koko wayenza yacaca gca into yokuba uya kuzama ukuwuphelisa umlo, Walawula u "Acapulco" Martínez (10-3-1), ngakumbi kumjikelo wesibini, xa wamqhuba Iintsontelo, ezidityaniswe nendibaniselwano enzima emthumela kwinqanawa.
Ngalesi siphumo, uSalcedo wazidibanisa njengetalente ebalulekileyo ye "Chiquita Boxing", ukongeza ekuphuculeni irekhodi lakhe elingoyiswanga kwi-13-0, evakalisa ukuba ukulungele umlo omtsha wokunyuka phezulu kwileli.
Kumsitho ophambili kwicandelo le-bantamweight, uLuis "Chapulín" Rosales (10-5-3), ophumelele sisigqibo sobuchwephesha (59-56, 57-57 kunye no-59-55) ngaphezulu UJosé Rojas Alba (Ngo-5-6-1).
"UChapulín" uRosales wayehla ngokufezekileyo, kodwa wasikwa kwiliso lakhe lasekunene kumjikelo wesine emva kwentloko eyabethwa ngengozi, eyayifuna uviwo lonyango kuloo mjikelo nakwesesixhenxe emva kokuba bekungakhuselekanga ukuqhubeka. Umlo wachazwa ngamakhadi kwaye uLuis wabhengezwa njengophumeleleyo.
Okwangoku, kumlo ongaqhelekanga, UAlberto “Alacrán” Ruiz (10-3) iphelisile irekhodi engoyiswanga ye UEduardo Martinez (7-1), owoyisileyo ngesigqibo sesininzi.
UJackson eNgilane uyeke uShiva Mishra ukuba enze ibango le-WBC yeNgingqi
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	ENgilani ngokuchasene neMishra, UJackson eNgilane, Shiva Mishra	0
UJackson eNgilane ngokuchasene neShiva Mishra
Umlo wamanqindi obalaseleyo e-Australia UJackson eNgilane uqhubeke nokuphumelela kwakhe ekumiseni umceli mngeni waseNew Zealand Shiva Mishra ePerth, ngoMeyi 26.
UMishra ukhuphisane kakhulu kwimijikelo yokuvula ngaphambi kokuba iNgilane ibambe ubuntshatsheli be-WBC Asia Super Featherweight, kunye ne-TKO kumjikelo we-6.
UMishra uqale ngokuphumelela kakuhle kumjikelo wokuqala kodwa ngowesithathu ebesengxakini yokubethwa kukudubula komzimba eNgilane.
Kumjikelo wesine nesihlanu ukudityaniswa kwamanqindi omzimba eNgilane kunye nokusikeka okuphezulu kwakune-Mishra, kwaye umlo waphela kumjikelo wesi-6 xa uMishra wayengakwazi ukuqhubeka.
I-England yandise irekhodi layo kwi-13 iphumelele, i-8 KOs kunye ne-1 draw.
I-Kazakhstan ilawule ukuGqibela kwabafazi kwe-ASBC eDubai
Umjikelo wokugqibela wabasetyhini wabanjwa ngomhla wesithandathu wokhuphiswano e I-ASBC Iimbaleki zamanqindi zamadoda aseAsia kunye nabasetyhini eDubai, eUnited Arab Emirates. IKazakhstan ibilawula kumjikelo wokugqibela wabasetyhini, iimbethi-manqindi zabo zifumene iimbasa zegolide ezisibhozo kwezilishumi. I-Uzbekistan ne-Indiya baphumelela isihloko esinye eDubai, apho i-Kazakhstan's UNazym Kyzaibay woyise umlando welizwe, UChungneijang uMary Kom Hmangte.
Zizonke iimbethi manqindi ezili-150 eziquka amanenekazi angama-47 akhuphisana ngeembasa neembasa zemali kwi-ASBC Asian Men's & Women Elite Boxing Championship. Amabhaso emali okhuphiswano lweembasa zegolide, zesilivere nezebronze zathiwa thaca nguNobhala Jikelele we-AIBA uMnu Istvan Kovacs waseHungary eDubai.
I-AIBA yabela i-400'000 USD ibhaso lemali kwi-Asia Boxing Championship. Kwiimbethi manqindi ezithatha indawo yokuqala, amadoda nabafazi, amabhaso yi-10'000 USD. Okwesibini, ibhaso lemali yi-5'000 USD kwaye kuzo zombini iimbasa zebronze yi-2'500 USD nganye.
La mazwe alandelayo ali-17 azimase i-ASBC yase-Asia yamadoda kunye ne-Women's Elite Boxing Championship e-Dubai: Afghanistan, Bahrain, Indonesia, India, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kuwait, Laos, Mongolia, Philippines, Qatar, Sri Lanka, Tajikistan, I-United Arab Emirates kunye ne-Uzbekistan.
UAlua Balkybekova waseKazakhstan uziphindezele kumdlalo wokugqibela
Uzbekistan UGulasal Sultonalieva wayengomnye wamagorha omhla wesine wokhuphiswano xa waqubuda kwiintshatsheli ezilawulayo, kwiiPhilippines ' UJosie Gabuco kumdlalo owandulela owamagqibela kankqoyi welightweightweight (48kg). U-Uzbek oneminyaka engama-22 ubudala wayeneenkumbulo ezintle malunga nomchasi wakhe wokugqibela, u-Alua Balkybekova wase-Kazakhstan elandela uSultonalieva woyisa imbangi yakhe engummelwane kwi-Ulan-Ude 2019 AIBA Women's World Boxing Championship. U-Uzbek omncinci watsibela kwelona banga lilungileyo lokulwa kwaye wamangaliswa nguBalkybekova ngohlaselo olukhawulezileyo ngexesha lotshintshiselwano lokuvula. Umlo wamanqindi waseKazakh ubenexesha elingaphezulu kwe-130 ngexesha lomsebenzi wakhe kwaye wazama ukwamkela inqanaba lokhuphiswano esebenzisa ukufikelela kwakhe ixesha elide kumjikelo wokuqala. U-Balkybekova usebenzise owona mgama ulungileyo kumdlalo wabo wokugqibela kwaye uziphindezele emva kwentlanganiso yabo yokuqala e-Ulan-Ude.
UNazym Kyzaibay waseKazakhstan wamisa ibali laseIndiya
I-icon yesizwe yomdlalo wamanqindi e-India u-Chungneijang u-Mary Kom Hmangte ufike e-Dubai ezokuthatha i-6th Isihloko saseAsia. Iimbaleki ze-AIBA yaBafazi beHlabathi izihlandlo ezithandathu yaphumelela phantse zonke izihloko zayo kwi-lightweight (48kg) ke ngoko yayiza kuphumelela imbasa yegolide ye-flyweight (51kg) eDubai. UMary Kom ubambe i-AIBA yeQela leNtshatsheli yaBasetyhini kwi-AIBA uNazym Kyzaibay ngenqindi elinzima ngexesha lokuvulwa komdlalo wabo wokugqibela. Inkwenkwezi yaseIndiya yayikrelekrele kunakwimidlalo eyandulela eyamagqibela kankqoyi kwaye wagxila kumdibaniso wakhe ngcono kumjikelo wokuqala. UKyzaibay uzame ukulandela isingqisho sakhe wabuya waya kukhuphiswano neejabs ezibalaseleyo kulandela ukufumana iingcebiso ezifanelekileyo kwikhefu lokuqala. I-Kazakh ivelise owona mjikelo wakhe ubalaseleyo kumzuzu wesithathu, xa wayelawula uluhlu lomlo kunye notshintshiselwano ngoko ke uKyzaibay wayimisa intsomi yaseIndiya eDubai.
Imbasa yesibini yegolide yase-Uzbekistan kwimbali yeentshatsheli yaphunyezwa nguSitora Turdibekova
Imbasa yegolide yokuqala neyedwa u-Uzbekistan kwimbali ye-ASBC yase-Asia yabaseTyhini yamanqindi yafezekiswa ngu-Guzal Ismatova ngo-2017 kodwa imbethi manqindi eselula yabhubha ekuqaleni kwalo nyaka ineminyaka engama-25. U-Kielce kulo nyaka kunye netalente eneminyaka eli-19 ubudala banike yonke into kumjikelo wokuqala ukumothusa umchasi wakhe waseKazakh, uVladislava Kukhta. Italente yase-Uzbek ihambe kakhulu ngeenyawo kunoKukhta kumjikelo wokuqala nowesibini ngexesha lomdlalo wabo wokugqibela onomtsalane kwi-featherweight (57kg). I-Turdibekova yayinomdla okhuthazayo wokugqibela kwaye uhlaselo lwayo oluphumeleleyo lwalwanele ukubetha iNtshatsheli yeSizwe yaseKazakh. UTurdibekova yimbethi manqindi yesibini evela eUzbekistan emva kukaGuzal Ismatova, onokuphumelela iwonga lomfazi waseAsia.
“Ndonwabe kakhulu ukuphumelela iMidlalo yamanqindi yam yokuqala yase-Asiya yabaseTyhini. Kwakukhuphiswano olunzima kum kwaye le yimbasa yegolide yokuqala kwiqela lethu kuyo yonke intshatsheli eyenze ukuba le mpumelelo yahluke ngakumbi. Le mbasa yegolide ndiyinikela kusapho lwam kwaye nakubalandeli abathandekayo baseUzbek, ” utshilo uSitora Turdibekova oneminyaka eli-19 ubudala wase-Uzbekistan emva komncintiswano wakhe wokugqibela.
URimma Volosenko waseKazakhstan wagibisela imbangi yakhe yaseIndonesia
URimma Volosenko waseKazakhstan uphumelele iitumente ezininzi zamanye amazwe kule minyaka mithandathu idlulileyo kodwa ngelishwa wayifumana ngentshatsheli enkulu ukuza kuthi ga namhlanje. U-Kazakh oneminyaka engama-29 ulawula yonke imincintiswano yakhe kwabasetyhini abasindayo (60kg) kwi-ASBC Asian Elite Boxing Championship. UVolosenko wayenomoya omangalisayo wokulwa kumdlalo wokugqibela ngokuchasene nembasa yebronze yaseIndonesia u-Huswatun Hasanah kwaye wagqiba kwelokuba akhuphisane ngokukhawuleza. U-Kazakh onamava ufumene amanqindi abulalayo kwaye usompempe waseCroatia waqinisekisa ukuba u-KO uphumelele kumjikelo wokuqala.
“Ndizilungiselele kakhulu ukuphumeza imbasa yegolide kwi-ASBC Asian Elite Boxing Championship. Umsitho unomdla kwaye iqela lethu lafika likwimo entle kulo msitho. Sisebenze nzima kulo nyaka, eso sisizathu sempumelelo yethu eDubai. Ndikulungele ukukhuphisana kwi-AIBA Women's World Boxing Championship elandelayo ukufikelela kwinqanaba lam elilandelayo, ” ibango likaRimma Volosenko waseKazakhstan.
UValentina Khalzova wabuya nembasa yegolide
UVazinaina Khalzova waseKazakhstan ubanga imbasa yegolide kwi-Astana 2016 AIBA Women's World Boxing Championship kunye nesilivere kwi-Ho Chi Minh City 2017 ASBC Asian Women Elite Boxing Championship. U-Kazakh oneminyaka eyi-25 ubuyele kwiqela lesizwe ngo-2020 emva kwekhefu kwaye wangqina ukusebenza ngokuqinileyo kwiitumente zokuzilungiselela kulo nyaka. U-Khalzova woyise i-Navbakhor Khamidova ethembisayo e-Uzbekistan kumjikelo wokuqala kwaye wayilawula neyesibini. UKhamidova uzame ukumothusa umchasi wakhe waseKazakh kumjikelo wesithathu ngejabs ekhawulezileyo kodwa uKhalzova wayenezakhono zokuphumelela i-welterweight (69kg).
U-Pooja Rani wase-India ubanga isihloko sakhe sesibini sase-Asiya
U-Pooja Rani wase-India ubanga imbasa yegolide kwi-lightweight (81kg) kwi-Bangkok 2019 ASBC Asia Elite Boxing Championship kwaye emva koko wehla waya kwi-middleweight (75kg). Ukulandela uChungneijang Mary Kom Hmangte kunye noLalbuatsaihi baphulukana nemidlalo yabo yokugqibela, indondo yegolide yokuqala yaseIndiya kwitumente yaxhonywa nguPooja Rani. Wayeneminyaka esibhozo emdala kunomlingani wakhe wokugqibela, uMavluda Mavlonova wase-Uzbekistan kwaye amava akhe athatha isigqibo se-middleweight (75kg).
“Luvakalelo olumnandi ukuthatha isihloko seAsia okwesibini emva kweBangkok, yile nto bendiyilungiselelwe kwezi nyanga zidlulileyo. Zange ndadibana nomchasi wam wase-Uzbek ngaphambili kodwa woyisa iMidlalo yeOlimpiki yaseKazakhstan iMarina Volnova ngenxa yoko bendilindele umlo onzima. Ndiyakholelwa ukuba ndibengcono namhlanje kwaye bendifanele ukuphumelela imbasa yegolide, ” Utshilo owafumana imbasa yegolide yokuqala eIndiya eDubai, uPooja Rani ngokukhawuleza emva komdlalo wakhe wokugqibela.
Uluhlu lwabaphumeleleyo kumjikelo wokugqibela wabasetyhini eDubai
48kg: IAlua Balkybekova, Kazakhstan
51kg: UNazym Kyzaibay, Kazakhstan
54kg: UDina Zholaman, Kazakhstan
57kg: USitora Turdibekova, Uzbekistan
60kg: URimma Volosenko, Kazakhstan
64kg: UMilana Safronova, Kazakhstan
I-69kg: UValentina Khalzova, Kazakhstan
I-75kg: IPooja Rani, eIndiya
81kg: UFariza Sholtay, Kazakhstan
+ 81kg: Lazzat Kungeibayeva, Kazakhstan
Usuku olulandelayo lokhuphiswano kwi-2021 ye-ASBC yase-Asia ye-Elite Men's kunye ne-Women's Boxing Championship
Ukugqibela kwamadoda alishumi kuya kubanjwa kusuku lokugqibela lokhuphiswano lwe-ASBC Asian Elite Men's kunye ne-Women's Boxing Championship e-Dubai ngoMvulo. Ukugqibela kwamadoda kuya kuqala eGreat Ballroom yeLe Meridien Hotel nge-31st ka-Meyi nge-6 ngokuhlwa ngexesha lendawo. I-Uzbekistan, i-Kazakhstan, i-Kyrgyzstan, i-Mongolia ne-Iran banethuba lokufezekisa izihloko zamadoda e-Dubai.
UMarc Leach noThomas Essomba eSheffield Arena ngalo Mgqibelo
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UDennis Hobson, Isikolo sokulwa, I-Fightzone TV, I-Leach vs Essomba, UMarc Leach, UThomas Essomba	0
UMarc Leach noThomas Essomba
ISheffield Arena 5/6/21
On NgoMgqibelo kuJuni 5, I-Champ yangaphambili ye-Bantamweight yesiNgesi, UMarc Leach, Ufumana umlo onzima xa ejongene UThomas Essomba kwi-Britane Super Bantamweight Isihloko sokususa. Isitayile sikaSalford uLeach unendawo yokubonisa ubungqina emva kokuba enqatshelwe ngaphambili kwiLonsdale Belt, kodwa uEssomba ukwimo entle kwaye uncanyathiselwe ukuba abangele ukuphazamiseka.
Umlo weZikolo UDennis Hobson: “Abalandeli bokulwa baseBritane bebekhala iminyaka ngoku ukuba babuyele 'kwiiLwesihlanu zokuLwa iiNight' kwiiholo ezincinci ezinemincintiswano ehambelana kakuhle kwaye ilwelwe nzima. Eminye yemilo ebisemagqabini eyakhe yenzeka eBritane ibikumakhadi anje kodwa iminyaka emininzi abalandeli benqatshelwe ithuba lokuzibona.
"Sinezinye iimilo zokulwa izihloko zommandla kula makhadi kwaye wonke umntu uyazi ukuba ezi iya kuba lulonwabo olukhulu kunye nexabiso lemali phakathi kwabafana ababini abazakuyinika yonke into ukuba ithathe eli bhanti leNdawo."
Ngale mini: UMike Tyson woyisa owayesakuba yintshatsheli uPinklon Thomas
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi wembali	mike tyson, UPinklon Thomas, UTyson vs Thomas	0
UMike Tyson vs. Pinklon Thomas
Ngamana 31st, 1987
“Intsimbi” Mike Tyson woyisile owayenguChampion UPinklon Thomas nge-TKO enomtsalane kwimijikelo emi-6, ikhusela ubuntshatsheli be-WBC heavyweight. Umlo wenzeka kwenye yeendawo zokupaka ihotele eHilton eLas Vegas. Usompempe yayinguCarlos Padilla. Abagwebi yayinguDalby Shirley, uGordon Volkman noHarry Gibbs.
ILiborio Solís ingqubana noLeosdan Núñez ePanama ngoLwesine
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	ULeosdan Núñez, ILiborio Solís, I-Solís vs Núñez	0
ILiborio Solís vs Leosdan Núñez
IPalacio Dorado kwisiXeko sasePanama 3/6/21
Owayesakuba yintshatsheli ILiborio Solís izakubuyela kwiringi ngoLwesine, nge-3 kaJuni ukujongana neCuba ULeosdan Núñez Umbutho weWorld Boxing Association (WBA) weFedelatin Bantamweight isihloko ePalacio Dorado kwisiXeko sasePanama.
I-Venezuela ibe lelinye ixhoba lokungasebenzi ngenxa yobhubhane kwaye khange alwe ukusukela ngoFebruwari 2020. USolís wabamba iwonga leSuper Flyweight kwihlabathi kwiminyaka embalwa edlulileyo kwaye nangona engenalo ithamsanqa kwiBantamweight, wenze imilo emikhulu kweli candelo.
Kumlo wakhe wokugqibela, igqala elineminyaka engama-39 ubudala laphulukana nesigqibo sokwahlulahlula uGuillermo Rigondeaux kumlo onzima apho uSolís waphantse wakhupha iCuba kumjikelo wokuqala.
Kwelakhe icala, uNúñez yimbethi manqindi yaseCuba ekhulayo esePanama. Uneminyaka engama-26 ubudala kwaye uza kuphulukana nesigqibo esilahlekileyo ukuya eSalvador Juarez waseMexico kumlo ekungekho bhanti yengingqi lisemngciphekweni.
USolís unerekhodi yeempumelelo ezingama-30, iilahleko ezi-6, ukuzoba okungu-1, kunye nee-KO ezili-14. UNúñez, okwangoku, uphumelele i-11, ilahleko e-1, kunye nee-5 ze-KOs.
UCharlie Schofield vs Mickey Ellison Isihloko eSheffield Arena ngolwesiHlanu
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UCharlie Schofield, UDennis Hobson, Isikolo sokulwa, I-Fightzone TV, UMickey Ellison, ISchofield vs Ellison	0
UCharlie Schofield vs Mickey Ellison
ISheffield Arena 4/6/21
On NgoLwesihlanu kaJuni 4 e Sheffield Arena, UCharlie Schofield kwaye UMickey Ellison Iya kuba sisihloko sesihloko esingenamntu seSiNgesi esiPhakathi soBukhulu obuphakathi kwinto ethembisa ukuba yimfazwe yeenzwane. Isibini saseLancashire-iSchofield isuka eAshton phantsi kukaLyne; U-Ellison waseDarwen-bajongane ngaphambili, kunye no-Ellison baphuma phezulu ngenqaku elinye kwitrasi enkulu kaSeptemba 2019.
Ikhadi eliphantsi ngobusuku liza kuba nomxube weetalente ezizayo kunye namagama amiselweyo- kubandakanya nentshatsheli yeBritane Welterweight champ UBradley Skeete -Kwimfazwe emibini yesihloko sendawo.
"Ukuba ungumlandeli womdlalo wamanqindi waseBritane, awunakuphulukana nale midlalo," utshilo u-Fight Academy's UDennis Hobson, Umququzeleli weziganeko zeSheffield. “Ukubhaliselwa kumjelo wamanqindi omtsha iFightzone kudlulile kuphahla kwaye okuninzi kukuhla ukuya kumgangatho wokulwa esikubekayo.
“Abalandeli bokulwa baseBritane bebekhala iminyaka ngoku ukuba babuyele 'kwiiLwesihlanu zokuLwa iiNight' kwiiholo ezincinci ezinemincintiswano ehambelana kakuhle kwaye ilwelwe nzima. Eminye yemilo ebisemagqabini eyakhe yenzeka eBritane ibikumakhadi anje kodwa iminyaka emininzi abalandeli benqatshelwe ithuba lokuzibona.
Owayesakuba yiChamp World Yuri Foreman esilwela i-UBO Isihloko ngoJuni 19
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	Iklabhu yokulwa iBuckhead, Iforimani vs. Williams, UJimmy Williams, UBO, Umbutho waManqindi kwindalo iphela, Yuri Foreman	0
Yuri Foreman vs UJimmy Williams
IBuckhead Fightclub, eAtlanta 19/6/21
Owayesakuba yintshatsheli yeWBA yeHlabathi Yuri Foreman (35-3, 10 KOs) isetelwe ukulwela umntu ongenamntu Umbutho waManqindi kwindalo iphela™ (UBO) isihloko se-Super Welterweight ngoJuni 19 e-Atlanta.
E Iklabhu yokulwa iBuckhead, IForimani iya kuthatha indawo UJimmy "Isiqhwithi Sokuthula" Williams (17-5-2, 6 KOs) kwisiganeko esiphambili somboniso obhalwe "Ukuboniswa komhlaba ngokufihlakeleyo".
Iprojekthi ukusukela ngo-2002, u-Foreman (40) uphumelele iwonga le-WBA World Super Welterweight ngokoyisa uDaniel Santos kwenye yeendlela zokudlala ezibalaseleyo zeManny Pacquiao vs. ikhadi likaMiguel Cotto eLas Vegas ngo-Novemba ka-2009.
Ulahlekelwe sisihloko kuCotto, i-icon yasePuerto Rican, kunyaka olandelayo, xa idolo lasekunene elonzakeleyo lidlale indima enkulu kuye yokumiswa kwimijikelo elithoba, emva komzamo wesibindi phambi kwabalandeli abangaphezu kwamashumi amabini amawaka eYankee Stadium eNew York .
Ngo-2017 u-Foreman, ummi wase-Israel owazalelwa eBelarus kwaye ozinze eBrooklyn, eNew York ukusukela ngo-1999, wafika emfutshane ngokuchasene ne-WBA ne-IBO World Champion u-Erislandy Lara, kwaye kwabonakala ngathi ithuba lakhe lokuphinda azuze uzuko lwangaphambili selifikile.
Kodwa, eziva evuselelekile, waqala ukubuya ngoDisemba wonyaka ophelileyo ngesigqibo esiphumelele umhambi uJeremy Ramos eLouisville, kwaye uyaqhubeka nokuvula indlela eya ekubeni yintshatsheli yamazwe amabini ukuba angamoyisa uWilliams nge-19 kaJuni. Isihloko se-UBO samanye amazwe.
KuWilliams (34), owayesakuba luluhlu lwengingqi lweWBC, eli lithuba elihle lokungazuzeli elinye ibhanti kuphela, kodwa nokuzenzela igama ngokoyisa iForimani ephumeleleyo. Naye uza kuphumelela, ke kungena umlo uzele kukuzithemba ukuba angaphazamisa uloliwe obuyayo.
Amatikiti eForimani ngokuchasene neWilliam UBO yokulwa isihloko ayafumaneka APHA.
30 UCanzibe 2021
7-0 UNathaniel Collins Utyikityo kunye noDennis Hobson's Fight Academy
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UDennis Hobson, Isikolo sokulwa, UNathaniel Collins	0
Ubunzima beentsiba ezinobunzima baseScotland UNathaniel Collins Utyikitye isivumelwano sokulwa ixesha elide UDennis Hobson's Isikolo sokulwa, njengoko ejonge ukutyhala phambili nesiqalo sakhe esifanelekileyo ebomini njengembethi manqindi eqeqeshiweyo.
Emva kokubetha uloyiso ezintlanu ngokulandelelana ngokukhawuleza kwinqanaba leeprojekti, ngo-2019 uCollins watyhaphaza ngelizwe lakhe elingoyiswanga, uMonty Ogilvie, kunye nomjikelo wesihlanu we-TKO ukuphumelela ukubanga isihloko seCeltic Featherweight kwisihlandlo sakhe sesithandathu.
Olunye uloyiso ekuqaleni kowama-2020 lushukumise iBeardley-Brawler ukuya kwi-7-0 (2) ngaphambi kokuba kuqhambuke inkqubo. Ngaphandle kokukhathazeka okucacileyo, uCollins uhlala eqhubeka ngendlela yonke, ekufumaneni izinto ezintle ezivela kwimeko embi.
“Indinike ithuba lokwenza izinto ezahlukeneyo kude nomdlalo wamanqindi.” Uvumile uCollins. “Bendihleli ndizilolonga ngeendlela ezahlukeneyo, njengokunqamleza umnqamlezo kunye nokuqubha. Bekulungile ukudibanisa izinto kunye nokugcina izinto zinomdla, kodwa bekumnandi ukubuyela ejimini, ukubetha ngenqindi nganye nganye!
"Ukusilela kwemilo bekuyinto engentle, kodwa ngethemba lokuba sisekupheleni kwayo ngoku kwaye singabuyela kuyo."
Phantsi kwesikhokelo somqeqeshi uJoe Ham Sr kunye nomphathi uSam Kynoch, iFight Academy inika umntwana oneminyaka engama-24 ithuba lokuqhubeka nohambo lwakhe lomdlalo wamanqindi eFightzone; kwaye uCollins ubeke iithagethi zakhe phezulu.
Ndisoloko ndibeke iliso lam kwindebe yehlabathi, kodwa ngamanye amaxesha awunyanzelekanga ukuba uhambe kwindlela yeBritane ukuze uye kwiibhloko zehlabathi. Ukuba isihloko seBritane sidubule kum endleleni eya kwinqanaba lehlabathi ndiza kuyithatha, kodwa ndiza kuthatha indlela elungileyo kum.
“Eli lelona thuba libalaseleyo kwimbali yam amanqindi ukuza kuthi ga ngoku. Ndiyazi ukuba ndinetalente, ndaya kwimidlalo eqhelekileyo kwaye ndenze izinto ezintle kumdlalo wamanqindi. Ndabeka lo msebenzi ndaza ndaphumelela isihloko seCeltic kwi-2019, ke ngoko ndenze ukungena kwam kwipro kwaye ndinokuya kwinqanaba elilandelayo, kwaye lithuba elikhulu lokuba ndenze oko ndihlala kwiFightzone.
“Xa bebaninzi abantu abazibandakanya neFightzone, kulunge ngakumbi ukuba ngumdlalo wamanqindi, ukuze babone italente kumdlalo kwiiholo ezincinci abangakufumaniyo.
“Abalandeli bamanqindi bangalindela uchulumanco xa bendibona ndisilwa. Imincili engapheliyo! Andikho apha ukurekhoda irekhodi lam. Ndibonisile kumlo wam weCeltic [iTayitile] - xa umntu esiza kulwa, ndiyabakhuphela ngaphandle, kwaye yile nto endiceba ukuqhubeka nayo.
"I-Flash" ibeka u-Oubaali ekuchaseni iMbali
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	I-Flash yasePhilippines, UNordine Oubaali, I-Oubaali vs Donaire	0
I-Nordine Oubaali vs Isiphumo seNonito Donaire
Iconic "Filipino Flash" yenze imbali ngobu busuku bangoMgqibelo ngokoyisa abo babekhuphisana nabo abangenakoyiswa - Ixesha likaBawo nakwintshatsheli engekoyiswa, UNordine Oubaali, ukuba yintshatsheli yehlabathi kwakhona uneminyaka engama-38 kunye neenyanga ezi-6 ubudala.
Umlo waqala ngononophelo nge-Donaire ityibilika ekunene jabs ukusuka emazantsi e-Oubaali. Kumjikelo wesibini sabona uDonaire osebenza ngakumbi, ephikisana no-Oubaali owayezama ukusondela. Amalungelo ka-Donaire ayefika kumhlaba ongezantsi.
Kwesithathu, u-Oubaali, owayesele epeyipile kunye nejab yakhe, wangena kwiliso lokunkcenkceshela ngokuthe ngqo. Ke ikhonkco elicocekileyo nelinexesha elifanelekileyo lasekhohlo ecaleni kwentloko yamwisa.
Waphakama ngesibindi kwaye waxhonywa yenye ikhonkco lasekhohlo. Ukubanjiswa ngeentambo, wagwetywa sisixhobo sokuqhusheka kanye phambi kwentsimbi, eyamsindisa okwethutyana. Usompempe uJack Reiss ubaliwe, kwaye u-Oubaali okhaliphileyo ngandlela thile waphakama kwaye ekugqibeleni wayifumana ikona yakhe.
Akuzange kuchukunyiswe emva kokuba engxangxazelele umchasi wakhe, u-Donaire ongasasebenziyo, wayesazi kakuhle ukuba isiphelo sikufuphi. Kodwa akazange akhawuleze apho iingelosi zoyika ukunyathela. Endaweni yoko kunoko, ngobuciko wayirhuqa ikhethini ngokudityaniswa kwekhohlo lasekunene elidityaniswe ngepini yasekhohlo ukuya kwinqanaba lomhlathi, ekungekho kuphuma kulo ngeli xesha.
UNonito wasondela ukuze ajonge imeko yalowo wayechasene naye owayegwetywe kwaye edumbile, waphakama, wancuma kwaye wamwola ngezemidlalo.
Ukuvala obu busuku bembali, omkhulu uJimmy Lennon Jr. ubhengeze uNonito Donaire njengentshatsheli entsha ye-bantamweight yehlabathi ye-World Boxing Council, othe wenza intetho yemvakalelo yombulelo kwiqela lakhe kwaye wagqabaza ngomnqweno wakhe wokuba yintshatsheli engenakuphikiswa kulo nyaka!
UDevin Haney vs Jorge Linares Iziphumo kunye neefoto
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	UDevin Haney, IHaney vs Linares, UJorge Linares	0
UDevin Haney vs Isiphumo sikaJorge Linares
IBhunga lomdlalo wamanqindi weHlabathi UDevin Haney Umlobi odumileyo waseVenezuela, UJorge Linares, ebambe umdlalo wakhe wamanqindi kunye emva koloyiko lwasemva kwexesha.
Umlo owawubanjelwe eMandalay Bay eMichelob i-ULTRA Arena wawusenziwa umdlalo weqonga. UHaney uthathe isigqibo esivumayo, kodwa umntu oneminyaka engama-23 waseMelika kwafuneka embe nzulu ukukhusela isithsaba sakhe se-WBC.
UDevin Haney wayenolawulo olwaneleyo kwisiqingatha sokuqala somdlalo esebenzisa intshukumo ecothayo kunye nokukhawuleza kwakhe ukunxibelelana noLinares; Nangona kunjalo, uLinares, kwimijikelo yokugqibela, ubonakalisile ukuba kutheni eyintshatsheli yezembali kwaye enzakalise imbangi yakhe ekupheleni komjikelo we-10 ngefuthe elikhulu lesandla sasekunene.
U-Haney kwafuneka abe nobuchule ngomhla weshumi elinanye nakoweshumi elinesibini, ebambelele ebomini obuthandekayo ukunqanda ukuphindaphinda idosi.
Umlo uhambe yonke indlela kwaye abagwebi bagweba u-116-112, 116-112 kunye no-115-113, bonke bexhasa intshatsheli, uDevin Haney.
Emva kokuphumelela olu vavanyo lunzima, uHaney uvumile ukujongana nelona candelo lihle: "Ukuba uTeofimo ulandelayo, masenze njalo." Utshilo.
UDevin Haney uphucule irekhodi lakhe elingaphumelelanga ukuya kwi-26 iphumelele nge-15 KOs, ngelixa uLinares ephuma eringini enerekhodi yobungcali yama-47 aphumeleleyo ane-29 KO kunye neelahleko ezi-6.
UChantelle Cameron KO`s uMelissa Hernandez kwiiRandi ezi-5
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	ICameron vs Hernandez, UChantelle Cameron, UMelissa Hernandez	0
Chantelle Cameron vs Isiphumo sikaMelissa Hernandez
I-Brit engoyiswayo UChantelle Cameron U-ably ukhusele iBhunga leNqindi yeHlabathi lomdlalo wamanqindi kwisithsaba esingenasisindo, ebetha UMelissa Hernandez kwimijikelo emi-5.
UChantelle Cameron uhlala egcina ulawulo lomlo. Ukusuka kumzuzu wokuqala, ukonakala kwakhe okucaphukisayo kunye nobuchwephesha kwabonakala. Uhlasele macala onke wafika kumanqindi amaninzi apho kwahlaselwa khona ngebhombu.
Ngaphandle kwesibindi kunye nentando yakhe, uMelissa akazange akwazi ukufikelela kunogada kaChantelle. Kumjikelo 4 wandwendwela ikhansile. Ngelixa kusenziwa ukubala usompempe wambuza ukuba uyafuna ukuqhubeka.
Amandla okulwa akatshintshanga kumjikelo wesi-5, kwaye usompempe uCelestino Ruiz, wagqiba kwelokuba angavumeli monakalo ongakumbi kumceli mngeni, ayeke umlo.
UChantelle Cameron uphucule irekhodi lakhe lokungoyiswa ukuya kwimilo eli-14 ephumelele i-8, ngelixa igqala uMelissa Hernández eshiye iringi enerekhodi ye-23 ephumeleleyo nge-7 KOs, i-8 ilahleko kunye ne-3 zitsala.
NgoMeyi 26, 2021; ELas Vegas, eNevada; Emva kwesiqendu sikaChantelle Cameron ngemini yeendaba ngexesha leveki yokulwa eMandalay Bay eLas Vegas, eNevada ngoMeyi 26, 2021. Ityala elinyanzelekileyo: Melina Pizano / Matchroom.
UDevin Haney: Ndibonisile ukuba ndinokukwenza konke
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UDevin Haney, IHaney vs Linares, UJorge Linares	0
Ityala lemifanekiso: Melina Pizano / Boxing Matchroom
UDaven Haney vs Jorge Linares Inkomfa yeendaba yokulwa umlo
Emva kokoyisa uJorge Linares ngesigqibo esinye ngakwimijikelo eli-12, uDevin Haney uthethe ngomlo athe wagqiba kwelokuba awuxubeke ngakumbi ngokuchasene nokubetha kunye nokusebenzisa amaqhinga akhokelela kushicilelo olubi kunye nokugxekwa ngabalandeli.
Olu tshintsho lwamaqhinga enzelwe umlo onomdla ngakumbi, ukuya kuthi ga ekumelweni nzima nguLinares ekupheleni komjikelo weshumi.
"Abalandeli bafuna ukuyibona loo nto," Utshilo uHaney. "Bafuna ukubona ukuba ndingangena phaya ndize ndihambe ndimchasele ezantsi. Umbethe ngeembumbulu ezinkulu. Ndibonisile ukuba ndinokukwenza konke, ndiyakwazi ukwenza ibhokisi, ndiyakwazi ukubetha, ndingathatha umfanekiso kwaye ndijongane nobunzima kwaye ndenze umsebenzi.
“Ibiyinto entle ukudubula, kodwa khange ndonzakalise, ngamanye amaxesha xa uthe wabethwa ngokudubula kakuhle, kufuneka ulumke, uqhubeke nesicwangciso somdlalo, kwaye ndiyenzile loo nto kwaye ndaphumelela.
“Bendisazi ukuba uza kuza apha ayinike yonke into, ibilithuba elihle kuye, angakulungela ukukhutshelwa ngaphandle ukuze aphumelele, athathe ezona zibhengezo zam zinkulu ukuze afumane eli wonga.
“Ndizigcinile ndisebenzisa ubukrelekrele, ndisebenzisa ijabs, ndatyhafela ndaza ndadubula kumjikelo we-12. Uza kudutyulwa ngamanqindi amakhulu emanqindini. Khange ndiphoswe. Khange ndonzakale. Uyabona ukuba amajoni ayekwa aze aphakame kuqhushumbe olukhulu kwaye abantu bayabancoma, andizange ndilahlwe, ndahlala ngeenyawo zam, ndaqhubeka nokuphosa izithonga ndazivalela ngaphandle.
“Ndifuna ukulwa eyona nto ibalaseleyo, ndihleli ndigxile kuJorge kule veki, bendisazi ukuba ungumntu okhuphisana naye onzima, kwaye ndiwenzile umsebenzi ngesicwangciso somdlalo. Ukuba uTeofimo Lopez ufuna ukuyenza ngokulandelayo, masiyenzele zonke iibhanti, ezona zinto zingenakuphikiswa. ”
I-MTK Global Lonsdale Box Cup ngoku iqhubeka ngo-Okthobha
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi ongahlawulwayo	mtk jikelele, I-MTK Global Lonsdale Box Cup	0
Ezidumileyo I-MTK Global Lonsdale Box Cup izakwenzeka ngoku ukusukela nge-21 ukuya kwi-24 ka-Okthobha kulo nyaka-kudityaniswa ezinye zeembethi manqindi ezithandwayo ezivela e-UK nakwamanye amazwe.
Ibona ukubuya ekulindelwe ixesha elide kwe-MTK Global Lonsdale Box Cup, ngomyalelo wethutyana wokubona ubunzima busenzeka ngolwe-Lwesine ngabo bonke abakhuphisana nabo benobunzima phakathi kwentsimbi yoku-1 kunye neyesi-9 ngokuhlwa, kunye nekota yokugqibela ngo-Lwesihlanu, Amagqibela kankqoyi ngoMgqibelo, nosuku lokugqibela ngeCawa.
Ngaphezulu kwe-148 yeeNtshatsheli ziyabuya zizama ukuqinisa amagama abo kwiincwadi zembali kwaye bahambe njengentshatsheli ye-MTK Global Lonsdale Box Cup 2021.
Ubhaliso lomdla kwiiklabhu zakho zamanqindi kunye neembethi manqindi ngoku zinokugqitywa kwikhonkco APHA. Amangenelo aya kuvuleleka kubo bonke abadlali bembethi manqindi engamadoda nabasetyhini kula maQela oNyaka e-DOB, ngelixa iindidi ze-KG ziza kulandela kungekudala.
B = 0 ukuya ku-8 kukhuphiswano
Ngo-2010 B-Amanqindi awesilisa nawesetyhini
Ngo-2009 B-Amanqindi awesilisa nawesetyhini
Ngo-2008 B-Amanqindi awesilisa nawesetyhini
Ngo-2008 A-Amadoda nabafazi ababhinqileyo
Ngo-2007 B-Amanqindi awesilisa nawesetyhini
Ngo-2007 A-Amadoda nabafazi ababhinqileyo
Ngo-2006 B-Amanqindi awesilisa nawesetyhini
Ngo-2006 A-Amadoda nabafazi ababhinqileyo
Ngo-2005 B-Amanqindi awesilisa nawesetyhini
Ngo-2005 A-Amadoda nabafazi ababhinqileyo
Ulutsha B- Iimbethi manqindi eyindoda neyasetyhini
Ulutsha A-Amanqindi awesilisa nawesetyhini
Abadala Iimbethi manqindi eyindoda neyabafazi
Ngenxa yezithintelo ezikhoyo, umthetho wobunzima be-7KG uza kurhoxiswa ngo-2021 kuzo zonke iintshatsheli ezibuyayo.
UNonito Donaire woyisa uNordine Oubaali eCarlifonia kwisihloko sehlabathi
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	UNonito Donaire, UNordine Oubaali, I-Oubaali vs Donaire	0
Isidima sePaki yezeMpilo kwiCarson, eCarlifonia 29/5/21
I-3-1 underdog Flash yasePhilippines yintshatsheli yehlabathi kwakhona.
Owayesakuba yintshatsheli yamacandelo amane uNonito Donaire (41-6, 27 KOs) waba yimbethi manqindi emidala yokuphumelela uloyiso lwetayitile yebantamweight yomhlaba ngokunkqonkqoza okungazange kwabethwa kunye no-3: 1 oyintandokazi, intshatsheli yeWBC bantamweight uNordine Oubaali (17-1, I-12 KOs).
Kumjikelo wokuqala wokuqala, uDonaire no-Oubaali bazamile ukubalisana kodwa kowesithathu, konke kwatshintsha UDonaire wathumela indoda eneminyaka engama-34 ubudala yaseFransi kwinqanawa. Waphakama, kodwa ikhonkco lasekhohlo lafumana uphawu lwalo kwakhona, ngeli xesha kanye emva kokuba kukhala intsimbi yokuphela komjikelo wesithathu. Usompempe ukhuphe inani apho u-Oubaali wabetha khona kodwa wabuyela kwikona yakhe engakhange azinze.
Kumjikelo wesine, u-Oubaali wayengaphindanga wachacha kunye no-Donaire ngoku ejonge ukuvala umboniso, awenzayo, kunye no-Oubaali ngeentambo kunye nokufaka i-uppercut enobundlobongela ngasekhohlo. U-Oubaali ngokoqobo walala edikeni kunye nosompempe uJack Reiss kungafuneki akhuphe isibalo njengoko wabonisa kwangoko ukuphela komlo. Ixesha lokumiswa yayiyi-1: 52 min.
Ngokuphumelela, uDonaire (41-6, 27 KOs) waba yeyona ndoda indala yokuphumelela isihloko se-bantamweight. Ku-Nordine Oubaali, nangona kunjalo, yayikukoyiswa kokuqala kwikhondo lomsebenzi wakhe wobungcali.
UChantelle Cameron woyisa uMelissa Hernandez eLas Vegas
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi, Umdlalo wamanqindi owasetyhini	ICameron vs Hernandez, UChantelle Cameron, UMelissa Hernandez	0
Ityala elinyanzelekileyo: Ed Mulholland / Igumbi lokutshatisa.
IMichelob ULTRA Arena eMandalay Bay eLas Vegas 29/5/21
UChantelle Cameron uvelise umboniso obalaseleyo kumdlalo wakhe wokuqala wase-USA njengoko wayeyekile UMelissa Hernandez ukugcina igama lakhe le-WBC super-lightweight.
UCameron (14-0, 8 KOs) wayebeka ibhanti lakhe kumgca ngokuchasene noHernandez (23-8-3, 7 KOs) eMichelob ULTRA Arena eMandalay Bay eLas Vegas, kwaye yavelisa ukusebenza ngokugqibeleleyo.
Inkwenkwezi yaseNorthampton yayinoburhalarhume kuyo yonke indawo, ifaka isibhamu esinamandla kwentsimbi yokuqala, noHernandez esokola ukujongana noxinzelelo awayebekwa kulo.
Ukuhlaselwa kwakhona kwaqhubeka kumjikelo wesine, kunye noCameron wakhupha intambo kwaye wathumela uHernandez kwinqwelo ukuze afune ukubethwa.
UHernandez ukwazile ukubuyela ezinyaweni zakhe kodwa wakwazi ukuqhubeka nomjikelo omnye, usompempe evala umlo kumjikelo wesihlanu ukuze anike uCameron uloyiso olukhulu.
Kwenye indawo ngoMgqibelo, uNordine Oubaali wabethwa ngelishwa xa wayephulukene nesikhundla sakhe se-WBC bantamweight kuNonito Donaire eDignity Health Sports Park eCarson, California.
Kwi-undercard, u-Batyr Jukembaev wayebandakanyekile kumlo omnandi kunye no-Subriel Matias, kodwa naye weza emfutshane ngexesha lomlo wabo naphambili.
Uncedo lwakho luza kuwenza umahluko - qhubeka uxhasa amanqindi 🙂
UDevin Haney woyisa iJorge Linares kunye neZiphumo eziGcweleyo zokuLwa ezivela eLas Vegas
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	Amari Jones, UChantelle Cameron, UDevin Haney, IHaney vs Linares, UJason Quigley, UJonathan Ryan Burrs, UJorge Linares, Khalil Coe, UMartin Joseph Ward, UMelissa Hernandez, UNathaniel Tadd, URamla Ali, Ukuhlaziya iMati, URyan Pino, Shane Mosley Omnci.	0
UDevin Haney vs Jorge Linares
IMichelob ULTRA Arena, eLas Vegas, eNevada 29/05/21
UDevin Haney wasigcina isihloko sakhe se-WBC seLightweight kumlo omnandi noJorge Linares eMichelob ULTRA Arena eLas Vegas, NV, bahlala kwi-DAZN.
UHaney (26-0 15 KOs) waqaqamba kwasekuqaleni ngezakhono zakhe zophawu lwentengiso, isantya kunye nokungaqiniseki ukubona intshatsheli iqala ngamandla ngaphezulu kwentshatsheli ye-World weight eyayisakuba yintshatsheli, ngomzimba otyalwe ngobuchule kwaye izixhobo ezisetyenziswayo zichanekile kwaye ziyinto entle.
UHaney kuye kwafuneka abonise ukuba unesilevu sokuhamba nesakhono, kunye noLinares (47-6 29 KOs) uhlala eyingozi kwaye elwa, ebonisa ukukhanya kwenjongo ebulalayo uHaney ayifakileyo kwaye ayiphephe-de kube sisiphelo esimangalisayo kwishumi.
I-Linares ihambise indibaniselwano ye-punch ezintathu eyanyibilikisa uHaney kanye ngentsimbi yomjikelo weshumi, owabona uHaney engazinzanga xa ebuyela kwikona yakhe. UHaney wahlala kude neVenzuelan kwiiseshoni ezimbini zokugqibela njengoko umntu oneminyaka engama-35 wayesiya kubulala, kwaye iijaji zanikela intshatsheli kumakhadi 116-112, 116-112 kunye no-115-113.
"Abalandeli bafuna ukuyibona loo nto," watsho uHaney. "Bafuna ukubona ukuba ndingangena phaya ndize ndihambe ndimchasele ezantsi. Mbethe ngeembumbulu ezinkulu. Ndibonisile ukuba ndinokukwenza konke, ndiyakwazi ukwenza ibhokisi, ndiyakwazi ukubetha, ndingathatha umfanekiso kwaye ndijongane nobunzima kwaye ndenze umsebenzi.
“Ndizigcinile ndisebenzisa ubukrelekrele, ndisebenzisa ijabs, ndatyhafela ndaza ndadubula kumjikelo we-12. Uza kudutyulwa ngamanqindi amakhulu emanqindini. Khange ndiphoswe; Khange ndonzakale. Uyabona ukuba amajoni ayekwa aze aphakame kuqhushumbe olukhulu kwaye abantu bayabancoma, andizange ndilahlwe, ndahlala ngeenyawo zam, ndaqhubeka nokuphosa izithonga ndazivalela ngaphandle.
UChantelle Cameron (14-0 7 KOs) wamangaliswa kwibala lakhe laseLas Vegas ngokutshabalalisa uMelissa Hernandez kukhuseleko lokuqala lwegama lakhe le-WBC World Super-Lightweight. UCameron uthe ufuna ukuqaqamba eSin City kwaye iBritane yenze kanye loo nto, ukuphuma kweebhloko ngeendawo ezilinganayo ngesantya kunye nochuku, kwaye indlela yakhe enoburharha yaqala ukuvuzwa kumjikelo wesine, xa uthotho lweenqindi ziphantse zafaka uHernandez Ngeentambo, emva koko usompempe wangenela ukunqanda ukhuphiswano kwindawo yesihlanu kunye nomceli mngeni phantsi komlilo ongaphezulu.
U-Azinga Fuzile (15-1 9 KOs) uzakube esilwela intshinga yeHlabathi kukhuphiswano lwakhe olulandelayo emva kokudlala kakuhle ukumisa uMartin J. Ward kwimijikelo esixhenxe. Ukuvutha okucothayo kuvutha umlilo kumjikelo wesine xa uFuzile ebeka iWadi ezantsi kwindawo yesine. UWadi ke wanqunyulwa entloko kumjikelo wesixhenxe, wabonakala ngathi wenzakele edolweni lasekhohlo, emva koko isandla esikhulu sasekunene sajikeleza iBritane kwaye wakhutshwa yikona.
UJason Quigley (18-1 14 KOs) kunye noShane Mosley Jr (17-3 10 KOs) bakhonze imijikelo elishumi yeenzwane ukuya kwi-WBO-NABO Middleweight isihloko, kwaye yayinguQuigley owajikeleza umlo olwa ngamandla ngesigqibo sesininzi , 95-95, 97-93, 96-94.
U-Khalil Coe (1-0 1 KO) ubonakalisile ukuba uzakuba liqela elincinci labachasi bakhe kunye nokubetha kakhulu kubalandeli njengoko eqala ubomi kwizikhundla ezihlawulelweyo ngomjikelo wesibini we-KO, emva kokubethwa kabini kwi-bodyshots kwiprogramu yakhe yokuqala Ujikeleze ngesinye isandla esikhohlo sasekhohlo ukuya embindini wokuphelisa imicimbi kwindawo yesibini.
UReshat Mati (10-0 7 KOs) ufumene imijikelezo exabisekileyo kumdlalo obambeleyo uRyan Pino ngaphambi kokuba kuqale ikhadi eliphambili, kunye neentshukumo zabo ezithandekayo ezijikeleze umgama kwaye iNew Yorker ifumane isigwebo kumakhadi, 60- 54, 58-56 kunye no-58-56.
URamla Ali (3-0) wonwabele umdlalo wakhe wokuqala eLas Vegas ngokuphumelela imijikelo emithandathu kuMikayla Nebel ngelixa u-Amari Jones (2-0 1 KO) eqale ngobusuku ephumelele umjikelo wokuqala we-KO kumdlalo wakhe wesibini.
29 UCanzibe 2021
I-Iran inamadoda amabini kumdlalo wokugqibela we-ASBC emva kweminyaka eli-16 yokuPhuka
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi ongahlawulwayo	UAbdumalik Khalakov, I-AIBA, I-ASBC, Azat Usenaliev, Chinzorig Baatarsukh, UDaniyal Sabit, UDaniyal Shakhbaksh, UElinur Abduraimov, Enkh-Amar Kharkhuu, U-Erdenebat Tsendbaatar, UMeysam Gheslaghi, Shakhobidin Zoirov	0
Umdlalo owandulela amagqibela kankqoyi wamadoda anamaxesha angama-20 abanjwa ngomhla wesihlanu wokhuphiswano e I-ASBC yase-Asia yamadoda kunye neyabafazi i-Elite Boxing Championship eDubai, eUnited Arab Emirates. I-Uzbekistan yaba lelona lizwe libalaseleyo emva kwayo, zisixhenxe kwiimbethi manqindi zazo ezadlulela kumjikelo wokugqibela ngelixa iKazakhstan yaqhuba kakuhle nayo kwaye isihlanu sawo sajoyina ukhuphiswano lwetayitile. Ababini baseIran bagqithela kumagqibela kankqoyi kwaye le yeyona ntsebenzo yabo intle ukusukela kuhlelo luka-2005.
UDaniyal Sabit oneminyaka eli-18 ubudala waseKazakhstan ugqibe kwelokugqibela kwitumente yakhe yokuqala
UDaniyal Sabit waseKazakhstan ubanga imbasa yegolide kuKhuphiswano lweLizwe loLutsha lowama-2019 elalisisihloko sakhe sokuqala kwilizwe lakhe. Uye waya kwi-2020 Elite National Championships kwaye ngelishwa wabanga isihloko se-lightweight (49kg) emva kokubetha owayesakuba liQela le-ASBC laseAsia uTemirtas Zhussupov kumdlalo wamagqibela kankqoyi. USabit, oza kugqiba i-19 kamva kulo nyaka, ufumene ilungelo lokuthatha inxaxheba kwi-ASBC Asia Elite Boxing Championship.
Ngaphandle kwento yokuba le yintshatsheli yakhe yokuqala, uSabit wachukumiseka zizakhono zakhe zobugcisa ezimangalisayo. Wayenesisusa esomeleleyo sokuyalela isingqisho ngokuchasene nePhilippines 'uMark Lester Durens. Umntu wasePhilippines oneminyaka engama-20 wayenokhuphiswano kuphela kumjikelo wokuqala, ke ngoko, uSabit wabhiyozela uloyiso lokugqibela. I-Kazakh eneminyaka eyi-18 izakudibana nembasa yegolide kunye neentshatsheli ezikhuselayo, uNodirjon Mirzakhmedov wase-Uzbekistan.
Iinkwenkwezi njengeZoirov kunye nePanghal banako ukubamba inqaku le-flyweight (52kg) kumdlalo owahlukileyo okhethekileyo
I-Uzbekistan iphumelele iMidlalo yeOlimpiki yase-Uzbekistan kwaye ilawula i-AIBA World Champion kwi-flyweight (52kg) uShabakhobidin Zoirov yimbethi manqindi emnandi kodwa wayenenye imbangi ephezulu kumdlalo wamagqibela kankqoyi, u-Azat Usenaliev waseKyrgyzstan. Imbethi manqindi yaseKyrgyz yoyise uZoirov kumdlalo wokugqibela we-Amman 2013 ASBC Asia Elite Boxing Championship kwaye badibana kwezinye iitumente ezidlulileyo. Kumdlalo wabo kwakhona, u-Uzbek oneminyaka engama-28 ubudala wasebenzisa umgama omde kakuhle kumjikelo wokuqala kwaye wafika kwi-Usenaliev ekhawulezileyo amatyeli ambalwa. I-Kyrgyz ikwangqina i-footwork ebalaseleyo kwaye yafumana imingxunya kukhuseleko lwe-Uzbek kumjikelo wesibini, ke ngoko, eyesithathu yayiyeyona iphambili phakathi kwabo. UZoirov wasebenzisa amandla akhe ngcono kunelinye iqela lakhe laseKyrgyz kwaye washenxisa imbangi yakhe engummelwane kukhuphiswano lwabo. I-Uzbek No.1 izakuhlangana kwindondo yegolide kunye no-Amit Panghal wase-India oza kuba ngumdlalo wokugqibela womdlalo wokugqibela we-2019 AIBA World Boxing.
“Ibikugqatso lwam lwesine nxamnye nalo mbethi manqindi onamava waseKyrgyz kwaye ndaye ndaphumelela isihlandlo esinye kwiminyaka esibhozo edlulileyo. Sasizazi izakhono zobugcisa kunye nesitayile kakuhle. Lo mdlalo wawungeyondlwan 'iyanetha kum, u-Usenaliev wayezimisele kakhulu ukuphumelela olu khuphiswano, kodwa nam ngokunjalo. Ndiyabulela kuThixo, ndilwenzile olu khuphiswano kwaye ndingayokuwina imbasa yegolide yobuntshatsheli, ”utshilo impumelelo yakhe uZoirov .
U-Erdenebat Tsendbaatar waseMongolia uphumelele umdlalo wosuku ngokuchasene nolutsha lwase-Uzbekistan u-Abdumalik Khalakov
Ukulandela u-Enkh-Amar Kharkhuu, owathi wagqithela kumdlalo wamagqibela kankqoyi we-bantamweight (56kg), umMongolia olandelayo, u-Erdenebat Tsendbaatar waba nomlo okumgangatho wehlabathi kumdlalo owandulela owokugqibela we-lightweight (60kg). I-ASBC yase-Asia eyintshatsheli kunye neMidlalo yase-Asia ephumeleleyo eMongolia yadibana nenye yeenkwenkwezi ezinkulu zehlabathi ezizayo, u-Abdumalik Khalakov wase-Uzbekistan kwizine zokugqibela zolu didi. Umzantsi waseMongolia wasebenzisa amandla akhe kumjikelo wokuqala kwaye wazama ukugcina uKhalakov kumgama omfutshane osebenza kakuhle. UKhalakov, ophumeleleyo konke ubuntshatsheli bolutsha, wasebenzisa isantya sakhe ngcono kwisibini kwaye umdlalo wakhe onobuqili waphumelela kuloo mjikelo. Ukuphumelela iMidlalo yeOlimpiki yoLutsha u-Uzbek kunye neMongolia babediniwe kumjikelo wokugqibela kwaye emva kwemizuzu emithathu yokugqibela, uTsendbaatar waphumelela umlo wosuku eDubai.
Umdlalo wokugqibela waseMongolia nguChinzorig Baatarsukh
U-Elnur Abduraimov wase-Uzbekistan wayeyimbasa yebronze kwi-Doha 2015 i-AIBA ye-World Boxing Championship kwaye imbethi manqindi enamava yomelele ngokomzimba kunakuqala. U-Uzbek oneminyaka engama-27 ubudala wadibana kumdlalo owandulela owamanqam kunye nembasa yesilivere yeMongolia yase-Asia uChinzorig Baatarsukh oligqala lomnye we-light welterweight (64kg). Ummi waseMongolia oneminyaka engama-30 ubudala waziva ngcono itempo kumjikelo wokuqala nowesibini, wafumana eyona engile ihlaselayo ngokuchasene no-Abduraimov kwaye wakhokela kwindawo yamanqaku. UChinzorig ulawule ukutshintshiselana nakwinqanaba lesithathu kwaye waba ngowokugqibela wesithathu eMongolia e-Dubai.
Abantu ababini baseIran badlulela kumjikelo wokugqibela emva kweminyaka elishumi elinesithandathu
Iqela lesizwe laseIran laqeqesha inyanga enye eYangiabad kunye neeUzbeks ngaphambi kokuqala kwe-ASBC Asia Elite Boxing Championship. Isibonelelo senkampu yoqeqesho kukuba ezimbini zeembethi manqindi zabo ziye phambili kumjikelo wokugqibela wokhuphiswano eDubai eyona nto iqhuba kakuhle e-Iran ukusukela ngo-2005. UNoureddin Chegini (60kg) noRohollah Hosseini (+ 91kg) babengabokugqibela e-Ho Chi Min City kwiminyaka eli-16 eyadlulayo kunye noDaniyal Shakhbaksh (60kg) kunye noMeysam Gheslaghi (81kg) benze okufanayo eDubai. Abantu abancinci baseIran baphumelele owamagqibela kankqoyi ngaphezulu kweentshaba zabo zaseIndiya nezaseKyrgyz namhlanje bashiyeke amathuba abo embasa yegolide.
I-ASBC yase-Asia ye-Elite yamadoda kunye neeNtshatsheli zeManqindi yaBasetyhini eya kuqhubeka emva kosuku lokuphumla nge-30th kaMeyi. Umjikelo wamanqam wabasetyhini u-10 ucwangciselwe olo suku kwaye iimbaleki zokuqala ziya kutyhilwa kwiseshoni elandelayo.
U-Esteban Bermúdez woyisa uCarlos Cañizales Ukuphumelela iTayitile engasindi
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	IBermudez vs. Cañizales, UCarlos Cañizales, U-Esteban Bermudez	0
Esteban Bermúdez vs Carlos Cañizales
WaseMexico U-Esteban Bermúdez betha ezimbini eziphambili ezibonakalayo kumjikelo wesithandathu ukuze babethe iVenezuela UCarlos Cañizales kwaye wahlutha isihloko seLightweight Association (WBA).
Ukusuka kwentsimbi yokuvula iimbethi manqindi zaphuma zaya kutshintshiselana, umlo uye kuwe wena noCañizales wayekhokela. Nangona kunjalo, izithonga zeAztec zenza isifotho eMzantsi Melika, owela kwimveliso yekona yelungelo kumjikelo wesithandathu, wagqitha kwinani le-8, kodwa kwangoko uBermúdez wayephezu kwakhe wawugqiba umsebenzi ngelinye ilungelo Imizuzu emi-2 imizuzwana engama-38 kweso sahluko.
“Ndiyabulela kuThixo ngokufika kwesibetho, bendinayo kwimijikelo elishumi elinesibini, kodwa ndiyambulela uThixo ngale nto yenzekileyo kwaye ndimlandele ngoku, ndiye ndaba yintshatsheli kodwa kulapho eyona nto inzima ivela khona,” yatsho intshatsheli entsha.
Isitshixo sokulwela u-Esteban kukuba wakwazi ukumelana nokuhlaselwa nguCañizales: “Ndicinga ukuba ndiphume ndinethemba lokuba yintshatsheli yehlabathi, enkosi kuThixo ngoku siziintshatsheli.”
UBermúdez ushiye irekhodi lakhe kwi-14 ephumeleleyo, ilahleko ezi-3, ii-2 zatsala kunye ne-10. Ngelixa uCañizales, ephulukana nesihloko sakhe ukuba wasikhusela ngempumelelo kabini, wongeza isiphako sokuqala kwi-resume yakhe enama-22 aphumeleleyo, 1 ukuzoba kunye ne-17 KOs.
Ukujonga ngakumbi: UJackie Nava
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi owasetyhini	UJackie Nava, UMario Benedetti, wbc	0
Kwiminyaka engama-XNUMX eyadlulayo, kwaqala ilivo kaJackie. Ukuqaqamba kwakhe kusenza sicinge ngalo mbongo ubhalwe nguMario Benedetti, “Abantu endibathandayo”, kuba ukuba singamchaza ngandlela thile, inokuba ngolu hlobo:
Ndiyabathanda abantu abavelisayo.
Abantu ekungafuneki ukuba ubatyhale kwaye ubaxelele ukuba mabenze ntoni. Bayayazi into ekufuneka yenziwe kwaye bayayenza.
Abantu abahlakulela amaphupha abo de loo maphupha athathe inyani yabo.
Ndiyabathanda abantu abanesakhono sokulinganisa iziphumo zezenzo zabo.
Abantu ababeka emngciphekweni othile ngokungaqiniseki xa beleqa phupha.
Ndiyabathanda abantu abahleli nje noontanga babo kunye nabo.
Abantu abanombulelo ngemihla yonke emitsha nangezinto ezintle ezikhoyo ebomini babo, abaphila iyure nganye benomoya olungileyo, benika okona kulungileyo kubo, benombulelo kuba besaphila, bekwazi ukunika uncumo kwaye banikele isandla sokunceda ungalindelanga mbuyekezo.
Le yeyona nto ibalulekileyo kaJackie Nava, umfazi onyanisekileyo nothembekileyo, ongoyikiyo nophikelelayo, ongazange anikezele xa kufikwa ekulweleni nasekufezekiseni amaphupha akhe. Uzalelwe eTijuana, eBaja California, ngo-Epreli 11, 1980, uJackie wabonisa umdla wakhe kwezemidlalo esemncinci, ke abazali bakhe bamtyikitya njengejimnastics yeOlimpiki eneminyaka eyi-4; emva koko wakhanyisa kumkhondo kunye nasentsimini nakwibhasikithi.
Nangona kunjalo, ukuthanda kwakhe yayikukunxibelelana kwezemidlalo kwaye eneminyaka eyi-16, waqala umsebenzi wakhe wobungcali kwibhola ekhatywayo, uqeqesho apho wazimisela njengentshatsheli yaseMntla Melika.
Ezalisekiswe yimpumelelo yakhe kwibhola ekhatywayo, uJackie wazibekela injongo entsha kunye nomceli mngeni omtsha wokuba yimbethi manqindi eqeqeshiweyo kwaye iyintshatsheli yehlabathi; ke, wayetshintsha umsebenzi wakhe wobugcisa kunye nomdlalo weiglavu, ngelo xesha, mhlawumbi ngaphandle kokwazi ubukhulu begama lakhe eliza kuzimela kumdlalo wamanqindi wabasetyhini.
Umsebenzi wakhe wokuqala wobungcali wawungo-Meyi 29, 2001, e-Honolulu, ngokuchasene noVicky Cozzy waseHawaii, owamoyisayo ngesigqibo esifanayo ngamanqanaba amane. Ngokukhawuleza, igama le "Aztec Princess" laye laziwa, kangangokuba ngo-2005, kwafika ithuba lokuba ahlala ephupha kwaye ngaphezulu kwako konke, lowo wafumana igama lakhe kwimbali yomdlalo wamanqindi, ukusukela nge-30 kaMeyi, -Ngomdla phantse ngemihla efanayo neyokuqala kwakhe - wathweswa isithsaba njengentshatsheli yokuqala yeWorld Boxing Council ngokoyisa uNew Yorker onamava uLeona Brown.
Ukusukela ngoko, uJackie Nava uye wangumlinganiso wokugqwesa, ubomi obude kunye nokuqaqamba kumdlalo wamanqindi. Intshatsheli yehlabathi kumacandelo amaninzi, umlweli osete iirekhodi zabapapashi kumabonakude osasazo, othe kwayile mini unerekhodi lemidlalo engama-37 ephumeleleyo, i-16 KO´s, i-4 yoyiswa kunye ne-4 etsala, kwaye ngaphandle kwako konke oku, uyavuma ukuba le minyaka ingama-20 ikhondo lomsebenzi itshayelwe ngokukhawuleza kunomoya. Ukwaqinisekisa ukuba le ibiyiminyaka yokusebenza nzima, iinzame, yokufunda ukuqhubeka, yokuzingisa nokungaze unikezele.
Imbethi manqindi eqeqeshiweyo enobuchule obugqwesileyo, isidanga kubugcisa bokwakha, umfazi omkhulu, umama onothando nozinikeleyo, umhlobo osisigxina ogqibeleleyo, uvulindlela kumdlalo wamanqindi wabasetyhini, umfazi oguqukayo naye obekhe wagqama kwezobupolitika, njengoJackie Nava, kulo Meyi kubhiyozela iminyaka engama-20 yomsebenzi kunye neminyaka eli-15 yokuthweswa isithsaba.
KwiBhunga lezeManqindi yeHlabathi, siyazibandakanya kule mibhiyozo mibini kuba uJackie uyakuba yintshatsheli yethu ngonaphakade, kodwa nangaphaya kwayo yonke loo nto, uyinxalenye yosapho lwethu, umzekelo wethu wokukhuthazwa kukukhanya kunye nobungqina obungenakuphikiswa bokuba amandla awodwa kwaye yavavanywa kwisakhono somzimba kodwa ukumanyanisa incopho yamandla angenakulinganiswa.
I-Badou Jack ngokuchasene noJean Pascal 2 icinyiwe kunye noPascal osilelayo kuvavanyo lweziyobisi
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UBadou Jack, UJack vs. Pascal, UJack vs. Pascal 2, UJean Pascal	0
UJean Pascal vs Badou Jack 2 urhoxisiwe
Owayesakuba yintshatsheli UBadou Jack ubhengeze ukuba umdlalo wakhe ophindwe nge-6 kaJuni owawungumceli mngeni wehlabathi ngokuchasene neqela langoku le-WBA lightweight UJean Pascal irhoxisiwe ngenxa yezinto ezintathu ezifumaneka kuvavanyo lweziyobisi.
UJack ubhale i-Twitter: “Umlo wam noJean Pascal AKUVALI njengoko ebevavanyiwe esteroids ezintathu ezahlukeneyo. Sikrokrela ukuba ungcolile ngexesha lokuqala kwaye kuvavanyo lwe-VADA kuyakuqinisekisa ngeli xesha. Ndisalwa nge-6 kaJuni kwaye iqela lam likhangela umdlali oza kungena endaweni yakhe.
" Ngendlela… ibingekokokuqala ukuba le yenzeke kum. U-Lucien Bute uthathe i-steroids kumlo wethu kwaye ngoku nguJean Pascal. Ngaba nonke niyayoyika ukuba nalwa kum ngokufanelekileyo ukuze nonke nithathe i-steroids? ”
U-Pascal uxelwe ukuba kuvavanyelwe i-Drostanolone, Drostanolone Metabolite A kunye ne-Epitrenbolone.
UJack ufuna umntu oza kuphikisana naye ngomhla wokulwa kaJuni 6.
Umlo ocwangcisiweyo phakathi kwentshatsheli yelizwe elinzima kwi-WBA (yesiqhelo) uJean Pascal kunye no-Badou Jack urhoxisiwe ngokusesikweni ngenxa yeemvavanyo ezi-3 (!!!) ezilungileyo ze-Canada.
Ilinye iqela elicwangciselwe uJack
Njengoko u-Badou Jack wabhengeza ku-Twitter, uJean Pascal wavavanya ukuba une-3 eyahlukeneyo: Umlo wam noJean Pascal ucimile kuba kuvavanyiwe ukuba une-steroids ezintathu ezahlukeneyo. Sele sikrokrela okokuqala ukuba ibingcolile kwaye siyavuya ukuba i-VADA ikwazile ukuyiqinisekisa ngeli xesha. Ndisazokulwa nge-3 kaJuni kwaye iqela lam likhangela umntu oza kungena endaweni yakhe. "
" Ngendlela… ibingekokokuqala ukuba le yenzeke kum. U-Lucien Bute uthathe i-steroids kumlo wethu kwaye ngoku nguJean Pascal. Ngaba nonke niyayoyika ukuba nalwa kum ngokufanelekileyo ukuze nonke nithathe i-steroids? ” UJack uqhubeke kwi-Twitter.
Ukunyuselwa kukaGreg Cohen kuTyikitya iiFeatherweight zeDeMichael Harris
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UDeMichael Harris, Ukunyuselwa kukaGreg Cohen, I-Triggerman	0
Ukunyuselwa kukaGreg Cohen ngebhongo ubhengeza ukutyikitywa kwesibhakela esingabethwanga UDeMichael "Triggerman" Harris kwisivumelwano sokuthengisa.
Ngaphandle kobunzima nje be-130 lbs., I-Harris (3-0, 3 KOs) imile ngokuma oku-6 'ubude kwaye, ngamandla ayo amangalisayo okubetha kunye nesantya esingaphezulu komndilili wesandla, ikhumbuza uninzi lukaThomas Hearns omkhulu.
Umntu oneminyaka eyi-24 uyinzalelwane yaseCleveland, kodwa ngoku uhlala kunye noololiwe eAtlanta. Umlweli owazalwa, uHarris wayefika kade kumdlalo wamanqindi kwaye wayenama-amateur ali-15 kuphela ngaphambi komhlobo osenyongweni kunye neentshatsheli zehlabathi ezinobunzima obuninzi uGervonta Davis wamqinisekisa ukuba athathe isitayile sakhe esinzima kwizikhundla zobungcali kwi-2019.
“Xa ndandisemncinci, utata wayedla ngokuza nomdlalo wamanqindi kum, kodwa zange ndaya ejimini. Bendikweminye imidlalo, ” ubalise uHarris. “Ngenye imini, xa ndandineminyaka eli-19 ubudala, ndagqiba kwelokuba ndiye kwindawo yokwenza umthambo ndize ndizame. Ukuya kwam okokuqala, bendingenakulunga, kodwa ndiyithandile kwaye ndiqhubeke njalo kwaye ndikhawuleze kakuhle kakhulu. ”
UHarris uqhubeke walwa phantsi kwamakhadi amabini abalulekileyo emilo kaDavis kwaye sele evelisa i-buzz eyomeleleyo ngobukhulu bakhe obukhulu kunye namandla akhe. Ukutyikitya noCohen, utshilo uHarris, sisiqwenga sephazili sokuphumelela ubuntshatsheli behlabathi njengomhlobo wakhe uDavis.
“Lithuba elihle eli kwaye ndiyakuvuyela ukusebenza naye,” Utshilo uHarris waseCohen. “Ndinethemba lokufumana igama lam phaya ndize ndibizwe ngokuba lithemba lonyaka ozayo. Yile nto ndijolise kuyo. Ndicinga ukuba ndingayenza. ”
Ukusebenza nzima kukaHarris kutshanje uchithe ixesha kunye neqela elalisakuba yintshatsheli u-Shakur Stevenson kodwa wenza uninzi lomsebenzi wakhe wokulungiselela e-Champs Boxing naku-Fitness e-Atlanta kunye nomqeqeshi wakhe wexesha elide kunye notata, uPete Crumpley.
UCrumpley, umhlobo kaCohen kunye nowayesakuba ngumlwi ngokwakhe, uthi uHarris wayebonisa iimpawu ukuba yinto ekhethekileyo ukusukela kwangoko.
"Ndiyakhumbula xa wayeqala ukuza ejimini," wa khumbula. “Ndiqaphele ukuba une-jab enkulu yomntwana eqala nje kwaye kungekudala ebesoloko esenza izinto ezilungileyo kwaye ebanika umsebenzi olungileyo. Wayezimisa ezinye zazo ngokudubula komzimba. Wayekuthanda ukwehla ezantsi kwaye wonke umntu ambethile emzimbeni wayeka ukuyeka. Kwaye ukuze akwazi ukusebenza no-Shakur enkampini xa eyi-3-0 pro eneemfazwe ezili-15 kuphela. Oko kuthetha lukhulu. Ndicinga ukuba unako ukuba yintshatsheli yehlabathi.
"Ndicinga ukuba angakhuphisana nabo bangcono kubo ngoku," Waqhubeka uCrumpley. “Abanye abalwa nabo bazalwa benayo kwaye abanye bayafundiswa. UDeMichael sisilwanyana. Xa ufumana umntwana onokubetha ngenhliziyo yakhe kunye nesibindi, yinto ekhethekileyo. Ukulungele ngokwenyani ukwenza nantoni na ukuze aphumelele umlo. ”
Umkhuthazi uCohen, nothathe inani lezinto ezingaziwayo ukuya kumhlaba wamanqindi othenjisiweyo, uthi uHarris uyamchukumisa ngezipho zakhe zomzimba kunye nentliziyo yakhe ebonakala ngathi ayipheli eringini.
Unamandla angakholelekiyo kwaye uhlala esiza, ” utshilo uCohen. “Ufunxa ulwazi njengesiponji kwaye unaso nesilevu esomeleleyo kakhulu. Kuza kuba nzima kuye nabani na okwiklasi yakhe yobunzima ukuba enze nantoni na naye. Ungumntu othuleyo ongaphandle komsesane, kodwa uvula iswitshi xa esilwa, kwaye ufuna ukukubulala. ”
U-Cohen uthi u-Harris uza kwenza i-GCP yakhe yokuqala nge-12 kaJuni e-Chattanooga, ngokuchasene nomchasi oza kuthiywa kungekudala.